Kunamata Points Kupokana Kukundikana muna 2021 | NZIRA DZOKUNAMATA
musha Pfungwa dzemunamato Kunamata Points Kupokana Kukundikana muna 2021
Nhasi tichave tichinangana nemunamato zvinongedzo pakurwisa kukundikana muna 2021. Isu tiri mumwedzi wechipiri chete we gore 2021 uye vamwe vanhu vari kutotarisana nekutadza mune chimwe chinhu chakati. Zvakawanda se2020 yakazadzwa nematambudziko mazhinji, kubva pakatanga Covidien-19 kune kuratidzira kweEndSars, vamwe vanhu vachiri negore ravo rakanaka mu2020 zvisinei.
Zvichakadaro, kune vanhu vasina kumboona chero nzira yekubudirira kana kubudirira. Kunyangwe mugore rino ra2021, vanhu vanga vachiverenga humbowo hwavo hwekuti Mwari akavakomborera zvikuru sei. Ipo, kune vanhu vasina kumbokorokotedzwa kare. Kana kukundikana kukava kungogara, zvishoma nezvishoma kunopedza shungu dzekuramba uchiedza. Dzimwe nguva, zvinoita kuti munhu arasikirwe nekutenda muna Mwari.
Kana usati wamboona budiriro huru kana budiriro mugore ra2020, zvakakosha kuti utore gore idzva iri rakakomba kuti usaripedze nenzira imwechete yawakagumisa yapfuura. Ndinoraira nemvumo yedenga, kwese kukundikana muhupenyu hwako ndakaparadza nemoto. Kune vamwe vanhu, kukundikana yunifomu yemadzitateguru kumhuri yavo. Ivo vakavharirwa mukutapwa kwedhimoni kwemuvengi. Kunyangwe vasati vaedza, vakatokundikana kare.
Mwari ave kuda kusunungura vanhu kubva pazvisungo zvekutadza. Vanozogadzirira vave kuda kusunungurwa kubva muhusungwa hwekukundikana. Ndinoraira nemvumo yedenga, nguvo dzese dzekukundikana dzave kushandiswa kukupfekedza, ngadzibate moto nhasi muzita raJesu. Kuti murume akapihwa zita rekuti Jabhezi naamai vake nekuda kwekurwadziwa kwavakaita panguva yekuzvarwa kwake. Jabez zvinoreva kusuwa, zvese nezvehupenyu hwake yaive nhoroondo isingaperi yekukundikana. Haana kumbobudirira mune chero chinhu chaanowanikwa nemaoko achiita. Izvi zvakaramba zvichiitika kusvikira zuva raakaneta nemamiriro ezvinhu ndokuchema kuna Mwari ndiye Isreal.
Saizvozvo, isu tinoda kuchema kuna Mwari nhasi. Kune vazhinji vedu vakaiswa chiratidzo chekutadza. Kune vazhinji vedu vane nguvo yaonekwa kutadza. Iye mutsvene weIsreal anoda kutisunungura. Mambo mukuru wekudenga anoda kununura vanhu vake, ndinokuzivisai nhasi semutauri waMwari, mazuva ako ekukundikana apera muzita raJesu. Kubva nhasi, zvese zvaunoisa maoko ako mugore rino 2021 nekupfuura zvichabudirira muzita raJesu.
Ishe Jesu, ndinouya pamberi penyu nhasi kuti ndinyore kuchema kwemoyo wangu. Kwemakore ndanga ndichifamba-famba mukutadza. Ishe, ndinonamata kuti mundibatsire kukunda dhimoni rekutadza muzita raJesu.
Chinyorwa chinodaro, uye ivo vakamukunda neropa regwayana uye nemazwi ehupupuriro hwavo. Ini ndinotema nemasimba edenga, wese mumiriri wekutadza anoparadzwa muhupenyu hwangu nhasi muzita raJesu.
Ishe, ndinonamata kuti netsitsi dzenyu, mundipe vatumwa vekubudirira, ngirozi dzekubudirira, muzita raJesu. Munzvimbo dzese dzandakakundikana mugore rapfuura. Ndinoraira kuti tsitsi dzenyu dzizondiberekera kubudirira muzita raJesu.
Baba Tenzi, ndinobatidza nguvo dzese dzemadhimoni dzekukundikana dzave kubuda pandiri. Kuti chero bedzi nguvo iri pandiri ini handizive kubudirira. Ishe ndinoraira nemvumo yedenga, regai nguo dzakadai dzibate moto nhasi muzita raJesu.
Ishe Jesu, ndinosangana nendimi dzese dziri kutaura zvakaipa nezve hupenyu hwangu. Nekuti zvakanyorwa kuti ndiani anotaura uye zvinoitika kana Ishe vasina kuraira. Ini ndakanyararidza izwi roga-roga, ndakacheka rurimi rwese rwuchitaura zvakaipa kuhupenyu hwangu uye nezvandakaenda, regai ndimi dzakadai dzibate moto nhasi nezita raJesu.
Ishe Jesu, rugwaro runoti kana munhu ari muna Kristu ava chisikwa chitsva uye zvinhu zvekare zvapfuura. Ishe, ndinopesana nemitemo yese yeimba yababa vangu. Ini ndinosangana nemhando dzose dzakaipa dzekukundikana mumba mamai vangu dziri kushanda kupokana nehupenyu hwangu, rega basa nhasi muzita raJesu.
Zivisai chinhu, uye ichasimbiswa ndizvo zvinotaura Ishe, Mwari wehondo. Ndinoraira kuti kubva nhasi, zvese zvandinoisa maoko pamusoro zvichabudirira. Kiyi yekubudirira, chakavanzika chebudiriro hachina kuitirwa chakavanzika kwandiri muzita raJesu. Chinyorwa chinoti chakavanzika chaishe chiri neavo vanomutya. Ndinoraira kuti chakavanzika chebudiriro chakaziviswa kwandiri muzita raJesu.
Ishe Jesu, ndinoporofita kupinda mugore rino ra2021, munzvimbo dzese dzandakatadza mugore ra2020, ngirozi dzekubudirira ngadzindiperekedze gore rino muzita raJesu. Ishe, ndinonamata kuti muise sungano itsva yekubudirira, chibvumirano chekubudirira kwandiri mugore rino muzita raJesu.
Ishe, ndinouya kuzopesana nekutadza kwese padhuze nekubudirira. Ndinouya kuzorwa naro nesimba reWekumusoro-soro. Jesu ndinonamata kuti muropafadze maoko angu. Ndinoraira kuti maropafadzo enyu achauya paminwe yangu mishanu, zvese zvandinoisa maoko angu mugore rino maererano nekuda kwababa ndinosunungurwa kwandiri muzita raJesu.
Gore ra2021, inzwa izwi raIshe, ini ndichabudirira mauri muzita raJesu. Izwi raishe rinoti Nyasha dzake dzakandikwanira uye simba rake rinoitwa rakakwana kunyangwe muutera hwangu. Ndakamira pachivimbiso cheshoko iri uye ndinoporofita kuti kunyangwe pandisina kusimba ishe ngaape simba rangu Kunyangwe padanho rekutadza nyasha dzababa dzinova budiriro kwandiri muzita raJesu.
Ndinokutendai Ishe nekupindurwa kweminamato. Ndinokutendai nekuti ndimi Mwari, nekuti muzita raJesu ndanamata.
munamato pakurwisa kutadza
Previous nyayaMinyengetero Yenzvimbo yechiKristu
inoteveraKunamata Points Kune Vasina Rubatsiro uye Vasina Tariro
140 Hondo Yemunamato Pikisheni Pasi peVanozvitambudza